Maxaa Xal U Ah Laabjeexa? - Daryeel Magazine
Maxaa Xal U Ah Laabjeexa?
Hunguriga iyo caloosha waxaa udhaxeeya muruq yar kaasoo sida caadiga ah xirma ama guntima marka ay cuntadu u gudubto caloosha waxaana loo yaqaana LES. Hadii uu dabco ama uu si fiican uxirmi waayo muruqaasi, waxaa dhacda in aashitada ku jirta caloosha ay si fudud ugu soo gudubto hunguriga taasoo sababta laabjeex.
Caloosha waxa ay lee dahay unugyo khaas ah oo ka difaaca in ashitada ay waxyeelo ugeysato, laakin hunguriga malahan unugyo ka badbaadiya aashitada. sidaa darteen marka qofku uu dareemo laab jeex, waxay ka tarjumeysaa in ay aashitada caloosha gubeyso unugyada hunguriga. Hadii astaamaha laabjeexu ay soo noqdaan ugu yaraan laba jeer isbuucii waxaa dhaca xanuunka loo yaqaano laabjeex. Xaaladaan caafimaad waxaa ka cawda dad badan oo kamid ah bulshada.
Maxaa u sabab ah Laabjeexa?
Waxa ugu badan ee sababa laab-jeexa waa eerno, xaalad caafimaad oo la xariirta in xubin kamid ah jirka ay booskeeda ka baxdo una gudubto boos kale. qaybta kore ee caloosha iyo muruqa u dhaxeeya hunguriga iyo caloosha ayaa kor ubaxa kana saramara muruqa u dhaxeeya saableeyda iyo ubucda kaasoo loo yaqaan Diaphragm . Sida caadiga ah muruqaan waxuu ilaaliyaa inay isu gudbaan labada qaybood, balse marka ay calooshu kor u baxdo waxaa hunguriga u gudba aashitada ku jirta caloosha taasoo sababta laabjeex.
Sababta ugu badan ee laabjeexa ayaa ah, in qofka uusan si wanaagsan u calaalin cunada, ama uu biyo kula cabo cunada, taas oo ku qasbeysa caloosha in ay ku burburiso aashito badan, aashitadaan ayaan usoo gudbta hunguriga, waxaana halkaas ka dhasha dareenka qofku uu dareemo xiliga laab-jeexa
Cunnooyinka qaar ayaa keeno laab-jeexa sida saliidda/dufanka, basasha, caffeega, cunnada sonkorta ku badantahay, shokolaatada iyo cunnada dhanaanka badanba iyo cunnada basbaasku ku badan yahay.
Dhadhan dhanaan ah wax walba oo aad dhanamiso
Kulayl xabadka kasoo kacaya caloosha ilaa hunguriga
Maxaa u daawo Laab-jeexa:
Markaad cuntayso kadib 2-3saac ha jiifsan.
Hala cabin biyo ama sharaab xiliga aad cunteyneysid,
Samee jimicsi jar si aad u yareyso cayilkaaga
Maxaa Haaraha Dawo U Ah? Maxaa Keena Cambaarta? Maxaa Kordhin Kara Caanaha Hooyada Ilmaha Nuujisa? Maxaa keena Dhiiga Ka Yimaada Gabadha Uurka Leh?